Amoxicillin Capsules 500mg, China Amoxicillin Capsules 500mg ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ - NINGBO FEIYUE TRADING CO.LTD
ငှက်ဖျားရောဂါ & Antiparasitic
Amoxicillin ဆေးတောင့် 500mg
အသေးစိတ်ထုတ်ပိုး: 10capsules / အဖုအနာ, 10blister / box ကို
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: TT, L ကို A / C
Amoxicillin သည်အထိခိုက်မခံနိုင်သောဘက်တီးရီးယားများ (β-lactamase ကိုမထုတ်လုပ်သောမျိုးစိတ်များ) ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောကူးစက်မှုများအတွက်သင့်လျော်သည်။
၁။ အထက်မှအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ၊ အိုတီစီမီဒီယာ၊ အနူသိစ်စ်၊ pharyngitis၊ တန်တီလီတီနှင့်အခြားအရာများစသော Streptococcus hemolyticus, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus သို့မဟုတ် Haemophilus influenzae တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
2. Escherichia coli၊ Proteus mirabilis သို့မဟုတ် Enterococcus faecalis ကြောင့်ဖြစ်ပွားသော Urogenital ကူးစက်မှု။
Streptococcus hemolyticus, Staphylococcus သို့မဟုတ် Escherichia coli ကြောင့်အရေပြားနှင့်ပျော့ပျောင်းသောတစ်ရှူးများကူးစက်မှု။
4. စူးရှသော bronchitis နှင့် hemolytic streptococcus, streptococcus pneumoniae, staphylococcus သို့မဟုတ် haemophilus influenzae ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အဆုတ်ရောင်ရောဂါစတဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါများ။
၆။ ဤထုတ်ကုန်ကိုအူရောင်ငန်းဖျားရောဂါ၊ peptic အစာအိမ်နာပြန်လည်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကိုလျှော့ချရန်အစာအိမ်နှင့် duodenum Helicobacter pylori တို့ကိုအမြစ်ပြတ်တိုက်ဖျက်ရန် amoxicillin ကိုလည်း clarithromycin နှင့် lansoprazole နှင့်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ တစ် ဦး ချင်း
Injection အတွက် Mezlocillin ဆိုဒီယမ်နှင့် Sulbactan ဆိုဒီယမ်
Injection အတွက် Cefalotin ဆိုဒီယမ်အမှုန့်
Injection အတွက် Cefepime